प्राधिकरणको ढाँटको बजार, चमेलिया बिजुली आउँछ भन्दै किन ढाँटिरहन्छ प्राधिकरण ?
५ वर्षमा सकिने भनिएको ११ वर्षसम्म बनेको छैन, साढे ८ अर्ब लाग्ने भनिएकोमा १६ अर्ब खर्च भइसक्यो, प्राधिकरण अझै ढाँट्न छाड्दैन !
आयोजना लागत प्रतिमेगावाट १८/२० करोड अनुमान थियो, चमेलियाको प्रतिमेगावाट करिब ५३ करोड पुगेको छ, आजसम्म राज्यलाई १६ अर्ब नोक्सान भइसकेको छ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । चालू वर्षको दशैंको टीका असोज १४ गते परेको थियो । यही अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुदूरपश्चिमबासीलाई ‘चमेलियाको बिजुली’ उपहार दिने घोषणा गरेको थियो ।
यसको अर्थ असोजको सुरुसँगै आयोजनाबाट बिजुली बल्ने भन्ने हो ।
प्राधिकरण तथा आयोजनाका अधिकारीले यो घोषणा गत जेठ अन्तिम साता गरेका थिए । अहिले पुस सकिँदैछ । अर्थात्, ७ महिना पूरा हुँदैछ ।
अझै आयोजनाबाट बिजुली बल्ने संकेत देखिएको छैन ।
भौतिक काम पूरा भएको भनिएको आयोजनाको अहिलेसम्म परीक्षणमात्र भइरहेको छ । जेठमै आयोजनाको ड्राइ टेस्ट सुरु भएको हो । तर, त्यो अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।
असोजमा बल्ने भनिएको बिजुली बलेन । कात्तिकमा पनि बलेन । मंसिर लाग्दा नलाग्दै बाँधको गेटमा समस्या आयो ।
कस्तो होला निर्माण कार्य, चुहिन थाल्यो
पानी गेट पूरै बन्द नभई पानी चुहिने समस्या देखिएपछि टेस्ट पनि लम्बिँदै गयो । बाँधमा देखिएको समस्या पहिचान तथा निराकरण गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट उच्च अधिकारी झिकाइयो ।
उनीहरू आउनै समय लाग्यो । यही कारण बिजुली बल्ने समय धकेलिएको आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालले बताए ।
कहाँ चुक्योे प्राधिकरण ?
आयोजनाको पूर्ववत् अवस्था अध्ययन तथा अनुगमन गरेर बिजुली बल्ने समय यकिन गरेको भए सर्वसाधारणलाई ढाट्नुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो ।
तर, प्राधिकरण तथा आयोजनाका अधिकारी आवश्यकता भन्दा बढी उत्तेजित हुँदै जनतालाई असोजमै बिजुली दिन्छु भने । प्राधिकरणले भनेजस्तो परिस्थित भएन ।
प्राविधिकरूपमा कहाँ कति बेला समस्या आउँछ । यकिन हुँदैन । तर, ११ वर्षदेखि काम गर्ने इन्जिनियरलाई कुन संरचना कस्तो बनेको छ ? कहाँनिर खराबी छ ? र, त्यसको उपचार के हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान हुनुपथ्र्यो । हेक्का नराखेको भए अध्ययन–अनुगमन गर्ने समय छुट्ट्याएर बिजुली बल्ने मिति भन्नुपथ्र्यो । यसो नगर्दा सर्वसाधारणलाई धोका भयो ।
आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन नभए पनि सर्वसाधारणले उज्यालो पाएकै छन् भन्ने तर्क हुन सक्छ । यो तथ्यगत तर्क होइन । बेइमानी हो ।
ढाँटको बजार, कतिसम्म ?
निर्माण सुरु भएको ११ वर्षसम्म आयोजना निर्माणमा झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ (सुरु लागत साढे ८ अर्ब) खर्च भइसक्यो । जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १८/२० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि चमेलियाको प्रतिमेगावाट करिब ५३ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।
अझै बिजुली बल्ने ठेगान छैन ।
२०६३ पुसदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजना २०६८ मंसिरमा पूरा हुनुपथ्र्याे । निर्माणमा झन्डै ६ वर्ष ढिला भयो । बढेको लागत र बिजुलीको हिसाब गर्दा राज्यलाई १५/१६ अर्ब नोक्सान भइसकेको छ ।
असोजमै बिजुली बलेको भए प्राधिकरणको आम्दानी अहिलेसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ थपिन्थ्यो । त्यो पनि गुम्यो । आयोजनाका अधिकारी अझै आजै वा भोलि नै बिजुली बल्छ भन्दै ढाँटिरहेका छन् ।
आउँदो शुक्रबार एउटा युनिटको ‘रिजेक्सन टेस्टिङ’ अर्थात् प्रसारण लाइनमा आयोजनाको बिजुली आवद्ध (सिंक्रोनाइज) हुने आयोजना प्रमुख दाहालले बताए ।
‘यो सफल भए रिलायबिलिटी टेस्ट हुन्छ, यो निरन्तर ७२ घन्टासम्म चल्छ,’ उनले भने, दुवै युनिट परीक्षण सफल भएपछि औपचारिरूपमा ग्रिडमा बिजुली पठाइन्छ ।’
दाहालका अनुसार एउटा युनिट पूरै परीक्षण गर्न करिब एक महिना लाग्छ । यसो हुँदा शुक्रबार पहिलो युनिट सफल भए अर्कोका लागि थप एक महिना चाहिन्छ ।
यही हिसाबले माघमा पनि चमेलियाको बिजुली आउने सम्भावना देखिँदैन ।
यद्यपि, बिजुली बल्न अब धेरै समय नलाग्ने दाहालले दाबी गरे ।
उनका अनुसार आयोजनामा पुनः समस्या नदेखिए जनवरीको अन्त्य वा माघ दोस्रो सातासम्म प्रसारण लाइनमा बिजुली पठाउन सकिनेछ ।
ऊर्जा खबरले लेखेको छ
बुधबार, २६ पुस, ०७४